स्व. पदमबहादुर राई स्मारक फुटबल टुर्नामेन्टको फाइनल खेल सम्पन्न, युनाइटेड एफसी बन्यो च्याम्पियन - खबरम्यागजिन
स्व. पदमबहादुर राई स्मारक फुटबल टुर्नामेन्टको फाइनल खेल सम्पन्न, युनाइटेड एफसी बन्यो च्याम्पियन
सजन शर्मा, सुके-पोख्रेबुङ, 13 फरवरी।
मझुवा ग्राम पञ्चायत अधिनस्थ अविकृत परिवार अप्पर ढाड़ गाउँको तत्वावधानमा आयोजित स्व. पदमबहादुर राई स्मारक फूटबल टुर्नामेण्टको फाइनल खेल हिमाली सङ्घ बनाम युनाइटेड एफसी भीरगाउँमाझ सम्पन्न भयो। अविकृत परिवारका अध्यक्ष खेम राईको अध्यक्षतामा तथा ग्राम पञ्चायत प्रधान मणि इजामको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा अन्य विशिष्ट अतिथिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
काजीमान राईले सञ्चालन गरेको यस फाइनल खेलमा शून्यको विरूद्ध तीन गोल गरेर युनाइटेड एफसी भीरगाउँ च्याम्पियन बन्यो। खेल शुरू भएको6मिनट नबित्दै युएफसीका सनम राईले पहिलो गोल गरे भने 24 मिनटमा शरण राईले दोस्रो गोल दागे। हाफटाइमसम्म शून्यको विरूद्ध दुई गोल गरेको युएफसीका शरण राईले खेलको लगभग अन्ततिर पुन: एक गोल गरेर विजेता दलको उपाधि टीमको निम्ति सुरक्षित राख्न सफल बने।
विभिन्न रङ्गारङ्ग प्रस्तुति समावेश गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मणि ईजाम, आयोजक समितिको पक्षमा चन्द्र राई तथा अन्यले प्रभावशाली वक्तव्य राखे। स्व. भीमबहादुर वाङदेल खेल मैदानमा भएको टुर्नामेण्टमा 32 वटा दलहरूले भाग लिएका थिए। फाइनल विजेता युनाइटेड एफसी भीरगाँउ एवं उपविजेता हिमाली सङ्घलाई नगद राशी 18 हजार रुपियाँ अनि 14 हजार रुपियाँ साथै ट्रफी प्रदान गरियो।
सबैभन्दा बेसी गोल गर्ने खेलाड़ी ऋपथ राई, सर्वश्रेष्ठ गोल रक्षक वीरू सुब्बा, मेन अफ द टुर्नामेण्ट उज्ज्वल राई, सर्वश्रेष्ठ दल लेप्चा गाउँ रङि्गत मझुवा अनि मेन अफ द म्याचको ट्रफी मञ्जित राईलाई प्रदान गरियो। सूरज राईको स्वागत सम्बोधनबाट शुरू भएको फाइनल खेलका मुख्य निर्णायक रोहित प्रधान थिए। कार्यक्रममा खेलप्रेमी दर्शकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको देशबहादुर कुलुङले जानकारी दिएका छन्।